Apple Music iPod taabto, nano iPod, shaandheyn, iyo iPhone, iPad
Qeybta 1: Music Apple u iPod
Qeybta 2: Music Apple u iPhone
Qeybta 3: Apple music for iPad
Qeybta 4: Download geeyo free music iyo wadaagaan dhammaan qalabka la TunesGo
Adeeg Music Apple waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo loo isticmaalo music geeyo madal adduunka oo dhan iyo waxa iska leh Apple Inc. Tani adeeg geeyo music users u saamaxaaya in ay helaan malaayiin heeso iyo music on qalabka ay macruufka, oo lacag la'aan ah marka hore ka dibna u gaar ah a qiimaha. Adeeg music waxaa la heli karaa si loogu isticmaalo iPhone, Macs, kumbiyuutarada, iPad iyo iPod. Waxaa muhiim ah in la ogaado in music Apple ma laga heli karaa iPod Nano oo isku shaandheyn iyo kaliya laga heli karaa iyada oo loo marayo iPod Touch.
Si inuu ka faa'ideysto ama u isticmaasho adeega Music Apple on your iPod Touch, waa inaad marka hore la hubiyo in qalabka uu leeyahay nooca ugu dambeeya ee macruufka taas oo macruufka 8.4. Haddii aan la cusbooneysiiyaa, markaas aad si fudud u samayn kartaa adigoo u socda goobaha ay ku qalabka, markaas xulashada goobaha guud oo markaas doonayo in doorasho update software ah. Taas ka dib, waxaad kala soo bixi kartaa, rakibi ka dibna reboot qalabka.
Haddii aad rabto in aad ogaato sida loo isticmaalo iyo muusiko dhegayso Apple on iPod taabto, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka soo socda ee la siiyo:
Sidee si ay u dhagaystaan ​​Apple music on iPod Touch,
abuurtaan music app Apple ku saabsan iPod taabto, ka dibna tubbada ah oo ku saabsan 'Ka bilow maxkamad 3 bil lacag la'aan ah' doorasho. Diiwan gelintaada Markaasaad bilaabi doonaa.
hadda loo baahan doontaa in aad doorato mid ka mid ah laba qorshe oo xubin kuwaas oo qofka iyo qoyska. Qorshuhu wuxuu shaqsi kharash $ 9.99 bishiiba iyo qorshaha qoyska 6 qof oo kharash $14.99 bil kasta. Tubada mid ka mid ah oo aad rabto in aad ka dibna saxiixo in si Lugood leh ID Apple iyo password aad.
Ogolaado shuruudaha iyo xaaladaha ka dibna loo xaqiijiyo in aad rabto in aad saxiixdo music Apple.
p Tallaabada 4
ayaa dhamaantood la dhigay si aad u sii qulquli iyo share kuwan raadkaygay dhex Apple music app.
Apple Music waa adeeg la yaab leh oo aad ku raaxaysan kartaa dhowr ah oo ay ka mid yihiin qalabka Apple iPhone. Si kastaba ha ahaatee, si aad u isticmaasho adeegga ku saabsan iPhone, waa in aad hubiso in macruufka aad telefoonka ee waa la cusboonaysiiyaa si version ugu dambeeyay sameeyaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado in aad ka heli doonin Apple Music dukaanka App laakiin halkii, waxay noqon lahayd inaad cusboonaysiiso iPhone in macruufka 8.4 ama wax ka sareeya. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo la doonayo in goobaha >> guud >> update software dooro >> download iyo rakibi. Ka dib markii aan sidaa yeelno, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka la siiyo si ay u isticmaalaan music Apple on your iPhone:
Riix soo gudbinaynaa Music icon cad aad screen Home. Halkan, waxaa la siin doonaa fursad u ah in ay ama u tag music ama bilaabayso free maxkamad saddex bilood of music Apple aad.
Haddii aad riix badhanka tijaabada ah, waxaa lagu weydiin doonaa in aad dooratid in aad rabto in xubin ama xubin qoyska u gaar ah. Gudaha gal, Ogolaado shuruudaha iyo xaaladaha Apple oo xaqiijin aad iibsatay.
hadda waxaad heli doontaa helitaanka on-baahida qeyb ka mid ah adeegga geeyo iyo fursadaha sida offline loo maqli qashanka aan xad lahayn iwm aad
ay dhacdo in aanad dooran in ay isticmaalaan version maxkamad of music Apple ah, haddii aad u saxiixay in la ID Apple aad, waxaad weli heli kartaa in ay helaan idaacadaha music Apple, iyadoo garaacday 1 xarun raadiye oo ay raacaan fannaaniin on Connect.
Adeeg music Apple sidoo kale waa la heli karaa si aad u iPad. Laakiin si ay u isticmaasho adeegan iyo ka faaidaysiga waxaa ka mid ah qalabka, waxaad u baahan doontaa inaad hore cusboonaysiiso iPad in nooca ugu dambeeya ee macruufka. Waa in aad xusuusatid in music Apple ma laga heli karaa dukaanka app, laakiin si aad u hesho oo aad u isticmaali, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo nooca ugu dambeeya ee iPad taas oo macruufka 8.4 ama wax ka sareeya. Si aad u cusboonaysiiso iPad in version, waxa aad marka hore u tegi kartaa saldhig oo aad iPad, guud ee la doortay, ka dibna dooro update software ka dibna dejisan iyo rakibi version this. Ka dib marka aad la sameeyo la rakibo ah nooca ugu dambeeya, oo aad kala socon kartaa tallaabooyinka la siiyo si ay u isticmaalaan music Apple on iPad.
Ka dib markii rebooting ah qalab aad, waxaad u baahan doontaa in aan bilowno music app Apple ah. Waxaad ku salaami doona shaashada firirka oo aad u soo dhaweyn doonaan in ay music Apple ah.
jaftaa on Start maxkamadda 3 bil free Halkan ka bilowdo hawsha diiwaangelinta.
hadda waxaad u baahan doontaa in ay doortaan nooca qorshaha xubin aad rabto. Waxaa jira laba hab xubin-gaarka ah $ 9.99 bishiiba oo xubin qoyskaaga $14.99 bil kasta. Tubada mid aad rabto.
saxiixo in dukaanka Lugood leh ID Apple iyo password aad ka dibna ku heshiiyaan in ay shuruudaha iyo xaaladaha Lugood. Xaqiiji in aad rabto in aad saxiixdo music Apple.
> Resource > Music > Apple Music for iPod taabto, nano iPod, shaandheyn, iyo iPhone, iPad